Meetion C500 Gaming Peripherals အစုအဝေးနှင့်ကီးဘုတ် combo | MEETION
Meetion C500 Gaming Keyboard Mouse နှင့် Obese Combo 4
1) အသက်ရှူခြင်းနှင့်အတူရောင်စုံ backlit ။ 2) သက်တောင့်သက်သာရှိပြီး soft keys များ,
3) အမှားအယွင်းများထွက်ပြေးရန်အချိန်, လေဖြတ်ခြင်း - 10 000 000 000 000 000 000 000 000 000 ပါပြီ။ 4) 19 keys anti-chosting
5. Windows XP / Vista / 7/8 / 10, Mac OS တို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ 6. Multimedia, Internet စသည်တို့အတွက် FN Shortcut ခလုတ်များ 12) ရွှေပြား USB USB Interfacs "
◆ Gaming Keyboard
3) အမှားအယွင်းများအခမဲ့ပြေးချိန်, 4) 19 သော့ကိုဆန့်ကျင်ရေးဆန့်ကျင်ရေး
5. Windows XP / Vista / 7/8 / 10, Mac OS တို့နှင့်သဟဇာတဖြစ်သည်။ 6. Multimedia, Internet, စသည်တို့အတွက် FN Shortcut ခလုတ် 12 ခု 7. ရွှေပြား USB Intervacy "။
◆ gaming mouse ကို
1) variable ကိုမီးမောင်းထိုးပြ။ 2) ညာဘက် / လက်ဝဲလက်အတွက် ergonomic အချိုးကျဒီဇိုင်း။ 3) ပျော့ပျောင်းသောထိတွေ့မှု, အပိုဆောင်းသွားလာမှုခလုတ်များ (ရှေ့သို့နောက်သို့) ။ 4) တိကျသော optical အာရုံခံကိရိယာ A704 ။ 5. DPI switch: resolution: 800/1200/1600/2000 ။ 6. အမှားအယွင်းများအခမဲ့ပြေးချိန်, လေဖြတ်ခြင်း - 3,000,000 ကျော်။ 7) OS သွယ်ဝိုက်ခြင်း - Windows XP / Vista / 7/ 8/1 10 ။ 8. ခလုတ်အရေအတွက် -7+ 1 (Scroll Wheel) ။
◆ gaming headpset
1) သက်သောင့်သက်သာရှိသောသားရေနားရွက်များ။ 2) ချိန်ညှိထားသောသားရေခေါင်းကိုက်။ 3) Fidelity Sound အရည်အသွေးအရည်အသွေးစတီရီယိုယူနစ် - φ40မီလီမီတာ, sensitivity 110dB, impedance 32ω, ကြိမ်မြောက်, 4) Sensititivity Microphone: Sensititivity Microphone: Sensititivity -58DB ± 3DB, Omini-directional, input power 50mw ။ Volume Controller ကို။ 5)2* 3.5mm စတီရီယိုအသံ connector ။
◆ Gaming Mouse Pad
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်များအတွက်အထည်မျက်နှာပြင်။ Non-Slown Natural ရာဘာ။ တိုးတက်လာသောခြေရာခံခြင်းအတွက် optical-friendly mouse ကို pad ။ အရွယ်အစား: 320 * 240 * 5mm ။ အလေးချိန်: 150g ။
ကီးဘုတ်အသေးစိတ် မောက်စ်သတ်မှတ်ချက်များ ဂိမ်းစတီရီယိုနားကြပ်သတ်မှတ်ချက်များဂိမ်း
သော့များ Q-ty 104/105 သော့များ Q-ty7+ 1 ခလုတ် အရောင် မဲသော
Key layout \_ t US / ARA / esn / ru ဆုံးဖြတ်ချက် 800/1200/1600 / 2400dpi ပေြာသူ φ40n
Q-Ty Shortcut ခလုတ်များ 12 အများဆုံး frame နှုန်း 4000 fps အာရုံများကိုထိခိုက်လွယ်ခြင်း 120 ± 3DB
OS လိုက်ဖက်တဲ့ Windows XP / Vista / 7/8 / 10 အများဆုံးခြေရာခံခြင်းမြန်နှုန်း 30Ps impedance 32ω
ချို့ယွင်းချက်အခမဲ့ပြေးအချိန် အကြိမ်ပေါင်း 10 သန်းကျော် အများဆုံးမဲရုံနှုန်း 250hz ကြိမ်နှုန်းတုန့်ပြန်မှု 10-20,000hz
ထိသိျက်နှာ ယူအက်စ်ဘီ အများဆုံးအရှိန် ကား 8 မိုက်ခရိုဖုန်း omni-directional
ဝါယာကြိုးအရှည် 180cm ဝါယာကြိုးအရှည် 180cm MIC ယူနစ်အချင်း φ6.0± 5.0mm
အရွယ်အစား (W * ဇ * ဌ) ခန့်မှန်း: 480 * 218 * 38mm အရွယ်အစား (W * ဇ * ဌ) ခန့်မှန်း: 130 * 73 * 45 မီလီမီတာ MIC selcivityivity ကို -56 ± 2DB
ကေဘယ်ကြိုးအရှည်2± 0.01m